गतिछाडा, समाजभाँडा तीजका गीत – manoranjansansar.com | A Entertainment News portal for all
गतिछाडा, समाजभाँडा तीजका गीत
बिहान चिया खाँदै परिवारसँग बसेर नेपाल टेलिभिजनमा लोकगीत हेर्दा एउटा तीजको गीतले दर्शकको मनोदशा खलबल्याउन सक्छ । हातमा रिमोट हुनेले पारिवारिक शालीनताका लागि च्यानल चेन्ज गर्न बाध्य हुनुपर्छ । कारण– गायिका ज्योति मगर आफ्ना वक्षका आधाभन्दा बढी भाग देखाउँदै गीत गाइरहेकी हुन्छिन्ः
नारी पुरुष समानले हो
मलाई उत्ताउली नभन जमानाले हो
गीतको अर्थ बुझ्न थाल्यो भने पसिना छुट्न सक्छ । नारी पुरुषसरह हुनका लागि आधा जिउमात्रै ढाक्ने लुगा लगाउनुपर्छ र ? त्यसमाथि उनी आफैँले उत्ताउली भएको महसुस गर्दै जमानाले त्यसो गराएको बताएकी छिन् । यस गीतकी गायिकालाई जमानाले उत्ताउली बनाए पनि ‘संस्कृति र पर्व’लाई उत्ताउलिने जमानासँग कुनै सरोकार छैन । योमात्रै होइन, ‘के जाति गर्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज’ भन्ने नेपाली उखानजस्तै प्रमाणित गर्ने तीजे गीतको भदौरे झरी नै परेको छ । यस्तै तीजको लय भएको अर्काे गीतमा गायिका राधा तिवारी छिल्लिएकी छिन्,
बैँसले आन्दोलन मच्चायो
गीतलाई लिएर युट्युबमा एक युवाले गरेको कमेन्ट रोचक छ । उनी लेख्छन्, ‘अर्काे अर्थ नलागोस्, गीतको भावनाअनुसार ‘आन्दोलन’ भएपछि लाठीचार्जको जरुरत पर्छ, होइन र ?’ गीत लेख्ने र गाउने दुवै सँगै भएको बेला गीतको भावार्थ खुलाउने हो भने लाज मान्नुको विकल्प होला र ? न्यून मूल्यको चर्चा कमाउनका लागि तीजे गीत लेखक र गायकले सामाजिक मूल्य मान्यतामाथि प्रहार गरिरहेका छन् ।
माइत जान नपाउनुको पीडा, दाजुभाइ नहुनुका पीर, माइती टाढा हुनुको कष्ट र दौँतरी माइती आँगनमा भेला हुन पाउनुका खुसी साट्ने उपयुक्त माहोल तीज थियो । सबै महिलाले गीतको माध्यमबाट आफ्ना दुःख बिसाउँथे र खुसी साट्थे । भगवान् शिवको प्रार्थना गरेर आफ्नो पतिको दीर्घायुको कामना गर्थे वा उपयुक्त वर प्राप्त गर्ने आशा व्यक्त गर्थे (यो बेग्लै कुरा हो कि यसमा कुनै वैज्ञानिकता छैन) । ती कुरा पनि तीजका गीतमा भक्तिरसबाट व्यक्त हुन्थे । यतिबेला अति शृंगारिक (जो केबल यौनसँग जोडिएको छ र जसले अभिव्यक्तिको सस्तो शैली अख्तियार गरेको छ) र ‘वीर’ रसका तीजे भाकाको वर्चस्व छ । गीतमार्फत कि ‘पोइ’ खोजिदिन शिवलाई घुर्की लाउँछन् कि त बैँसले उन्मुक्त तरुनीहरू छिल्लिरहेका छन् ।
तीजको लय भएका तर आत्मा नभएका गीतहरूले संस्कृतिको मात्रै होइन, सामाजिक मूल्य र कानुनको समेत हुर्मत लिइरहेका छन् । राधिका हमालले गाएको ‘मलाई हुन मन लाग्यो कान्छी पार्वती’ले बहुविवाह गर्न नपाइने नेपाली कानुनलाई चुनौती दिएको छ । कुनै कुरालाई सहज ढंगबाट महसुस गराउन गीत÷संगीतको सहारा लिइन्छ । तर, समाज भाँड्ने यस्ता गीतले बजार पिटिरहेका छन् । सञ्चारमाध्यममा यिनै गीत दिनको दर्जनौँ पटक बजिरहेका छन् ।
अहिले टेलिभिजन र रेडियोले अत्यधिक बजाउने अर्काे गीतले त घरबारै भाँड्ने कुरा गरेको छ । गायिका शिलु भट्टराईको आवाज रहेको गीतमा भनिएको छः
ठाउँको ठाउँ ढल्ने गरी मलाई कत्रो पीर छ
कि त जेठी छाड कान्छा कि त मलाई बिर्स
आफ्नो पतिको आयु लामो होस् भनेर व्रत बस्ने पर्वमा अर्काको पति खोस्ने आशयको यो गीत गाउने र यही गीत घन्काएर नाच्नेले कस्तो ‘धर्म’ मानेका हुन् कुन्नि ! तीजका व्रतालु दिदीबहिनी यो गीतमा कुन मानसिकता बनाएर नाच्दा हुन् ? यो गीत गाउने, लेख्नेलाई सर्जकको सामाजिक दायित्व हुन्छ भन्ने हेक्का कसले दिलाइदेला ?
यो त विवाहिताको कुरा भयो, अविवाहिताले चाहिँ सुयोग्य वर पाऊँ भनेर व्रत बस्ने गरेका कहावत् छ । अविवाहितालाई लक्ष्य गरेर राजेश खड्काले लेखेको गीतमा तीजका बेला नाच्ने युवतीको चरित्रमै शंका उत्पन्न हुन्छ । गीतले भन्छ–
खानदानी महिलाले तीजलाई गहना प्रदर्शन गर्ने पर्वका रूपमा तीजको दुरुपयोग गरिरहेका छन् । त्यही गलत प्रवृत्तिलाई गीतमार्फत बढावा दिने गायिकाको पनि कमी छैन । मायालाई सम्पत्तिसँग नदाँज्ने कुरा ‘पुरानो’ बनाउनेहरूको समर्थनमा दिलु गुरुङ सृष्टिको शब्द देवी घर्तीले गाएकी छिन्–
माया पनि आजकाल त जातीविधि गरे
घिनघिनाघिन घिन्, कहिले आउला यस्तो भन्ने दिन
यही आशयलाई समर्थन गर्दै गायिका बिनु तामाङले गीतमार्फत ‘दश हजार पर्ने’ सारीको माग गरेकी छिन् । दश हजारभन्दा कम मासिक आम्दानीमा घरव्यवहार धान्नेको संख्या धेरै भएको यो देशमा यस्ता गीतले समाजलाई कतातिर डो¥याउन खोजेका हुन् ?
तीज भनेको युवतीका लागि नुवाकोटमा हुने गोरुजात्रा हो र ? होइन भने किरणबाबु पुनले लेखेको ‘कसको ब्वाइफ्रेन्ड राम्रो, दाजौँ ठिटी हो’ भन्ने गीतको अर्थ के हुन्छ ? प्रदीप अधिकारीले लेखेको ‘अहिलेको तीजमा म जस्तै पोइ माग’ जस्ता असभ्य शब्द दिदीबहिनीहरूले कसरी पचाइरहेका छन् र सामाजिक रीतिथितिलाई चुनौती दिँदै ‘बाल मतलब भएन बबाल मचाउँछु’ जस्ता गीतले किन प्रश्रय पाइरहेका छन् ?
तीजका बेला हुने भड्किला कार्यक्रम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रोकेको छ । यसैगरी परम्परादेखि नै नारीको सम्मानको प्रतीक र उनीहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रूपमा स्थापित पर्वलाई विकृत बनाउन भइरहेको संगीतको दुरुपयोगलाई पनि रोक्न जरुरी छ ।
त्यो सम्झना र यो सज्जु
म त सुवास नेम्वाङ रे